Njikọ TUBITAK na TCDD iji mepụta Nnukwu ike | RayHaber
HomeTurkeyMpaghara Marmara41 KocaeliImekọ n'etiti TÜBİTAK na TCDD iji mepụta Nnukwu ume
Imekọ n'etiti TÜBİTAK na TCDD iji mepụta Nnukwu ume
23 / 09 / 2019 41 Kocaeli, ụgbọ okporo ígwè, General, Isi akụkọ, Mpaghara Marmara, Turkey
The Scientific na nkà na ụzụ Research Council of Turkey (TUBITAK) na Republic of Turkey State Railways (TCDD), n'etiti "Institute of Okporo ígwè Transport Technologies" bịanyere aka a imekọ ihe ọnụ protocol na oruru. Onye Minista nke Industrylọ Ọrụ na Teknụzụ Mustafa Varank, n'okwu ya na ememe a bịanyere aka na ya, kwuru, sị: “A ga-ehiwe Institute of Teil Transport Teknụzụ na Gebze na ọkachamara 100 na TUBITAK MAM Energy Institute. Mgbe nke a gasịrị, o kwuru na TCDD ga-arụkwa ọrụ na ụlọ ọrụ Ankara nakwa na ndị ọrụ 500 R & D na-ele anya iru ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ R & D na ebumnuche ya iji nweta nnwere onwe teknụzụ na mpaghara ụgbọ okporo ígwè.
N'ime Ozi, 11. Varank kwuru na ha kwusiri ike ịdị mkpa nke sistemụ ụgbọ okporo ígwè na atụmatụ 2023 Mmepụta na teknụzụ kwadebere n'etiti usoro mmepe. Mịnịstrị nke alsogbọ njem na-eme atụmatụ itinye ego euro ijeri 15 na mpaghara a, gụnyere ihe mgbochi, n'afọ 70 na-esote. Ọnụ ego a naanị na-egosi anyị otu iji akụ na ụba obodo na nke mba ya siri arụ ọrụ na usoro ụgbọ oloko dị mkpa. ” Varank, bịanyere aka protocol na nnọchite nke catch nke nkà na ụzụ onwe, na-ekwu na ọ bụ ihe dị mkpa nzọụkwụ, "Ihe mgbaru ọsọ anyị ka Turkey, okporo ígwè catch nke nkà na ụzụ onwe ya na ndị ụgbọ oru. Usoro nkwado a ga-ebinye aka taa ga-abụ ihe dị mkpa ga-enyere gị aka nnwere onwe a. Site na usoro a, anyị guzobere ụlọ akwụkwọ na mmekorita ya na TUBITAK na TCDD. N'ihi ya, ọ bụghị nanị na onye ọrụ na onyinye nke onwe oru, anyị chọrọ ịbụ a Turkey nke ebupụ technology nke na-ezukọ ha mkpa ha na ịzụlite. "O wee sị.
"Mkpokọta R&D ga-ebu ụzọ TÜBİTAK"
Iji mezuo nke a, Varank kwuru na ha enyochala ihe atụ ndị na-aga nke ọma na ụwa wee gaa n'ihu: ük Anyị ahụla na ụlọ ọrụ nke mba ahụ na-arụ ọrụ dị mkpa na usoro nhụsianya na teknụzụ njem. Ya mere, Ministri nke Industrylọ Ọrụ na Nkà na ụzụ na oflọ Ọrụ Na-ahụ Maka designgbọ njem na-emepụta ụdị yiri nke a. Na usoro nke mbụ, anyị na-ehiwe Institute of Rail Transport Teknụzụ na TUBITAK MAM Institute Institute na ndị ọkachamara 100 dị na Gebze. E mesịa, a ga-eme ọmụmụ n'ụlọ ọrụ TCDD nke Ankara. Anyị na-atụ anya iru ndị ọrụ 500 R & D. Ya mere, ọrụ R&D ga-eme site n'aka ndị nchọpụta ruru eru ka TÜBİTAK ga-arụ ọrụ. Ogwe njikwa na ndụmọdụ nke Institute a ga-enwe ndị nnọchi anya TUBITAK na TCDD. Iji mee ka ikike nke TCDD dịkwuo elu, a ga-enye ndị ọrụ nke ụlọ ọrụ ahụ ohere iduzi agụmakwụkwọ. "
“Ihe Mgbaru Ọsọ Ndị A Amataghị”
Ministers Varank, mbụ na oruru nke institutes nke Turkey si mkpa n'ọdụ ụgbọ okporo technology ga-e na mpaghara mba ego, na-eduzi technology nyefe nkwekọrịta ndị a institutes na kwukwara ebe a na mmepe nke ga-eme n'ọdịnihu okporo ígwè technology. N'okpuru na ihe mgbaru ọsọ setịpụrụ bụ ihe ezi uche, Varank kwuru, Achọrọ m mesie nke a. O nwebeghị mgbe m kwuru ihe mgbaru ọsọ ndị a. Anyị nwere ndị ọchụnta ego siri ike na-emepe emepe na mba anyị nke nwere ike imeghari ebumnuche ndị a na ngwaahịa. N’ọnwa Juun, na nke izizi na 2018, otu ụlọ ọrụ na-ebupụ ụgbọ njem ụgbọ ala na Thailand. Enwere m olileanya na ụlọ ọrụ a ga-enye ndị na-azụ ahịa yiri ya ihe ga-enyere ha aka ma nyere ha aka ”.
“Turkey ga-abụ onye na-ebubata ngwa ahịa na teknụzụ na ilgbọ njem ụgbọ ala”
Onye Minista Na-ahụ Maka Transportgbọ njem na akụrụngwa Cahit Turhan kwuru na site na njikọ aka guzobere n'etiti ụlọ ọrụ abụọ a, mba anyị ga-aghọ mba ọsụ ụzọ na-ebupụ teknụzụ na ụgbọ mmiri. N'ọnọdụ a, Minista Turhan kwuru na ụlọ ọrụ ahụ ga-ebu ụzọ chepụta teknụzụ ụzọ ụgbọ ala nke obodo anyị chọrọ na akụrụngwa nke obodo na mpaghara ma mezuo nkwekọrịta nyefe teknụzụ. Minista Turhan kwuru, mevcut Mgbe ịbawanye ikike teknụzụ nke mba anyị, ụlọ ọrụ ahụ ga-abụ ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na teknụzụ ụgbọ ala nke ọdịnihu ".
Peration Imekọrịta n'etiti TÜBİTAK na TCDD Ga-aghọ Nnukwu Ike ”
Minista Turhan kwuru na Institutelọ Ọrụ Transportgbọ njem ụgbọ ala, nke a ga-eme ka ya na TCDD-TÜBİTAK ga-atụnye ụtụ n'ihe ọmụmụ ndị a ma kwuo, "Ihe ọmụma TUBITAK, ahụmịhe akụkọ ihe mere eme TCDD, ga-enweghị nnukwu ike. Neededzọ ụgbọ oloko na ngalaba ike a chọrọ. Maka na mmụba nke itinye ego n’ọdụ ụgbọ ala n’obodo anyị, ngụkọta oge nke okporo ụzọ na ọnụ ọgụgụ ụgbọ ala na-abawanye ngwa ngwa. Site na mmụba a, mmepe nke ngwaahịa anyị chọrọ site na akụrụngwa nke anụ ụlọ na nke mba aghọwo ihe na-esiwanye ike na usoro. Turhan kwusiri ike na ọ dị mkpa ịghọta nnwere onwe nke teknụzụ na mpaghara ọdụ ụgbọ okporo ígwè ka aga-eme ọnụ ijikọ ego 2035 na ntinye akụrụngwa ruo n'afọ 70. emeela na. N'echiche a, anyị na-ewere nzọụkwụ na usoro a ga-edebanye aha ya 'obere maka taa ma buru nnukwu ibu maka ọdịnihu'. Enwere m olile anya na site na ihiwe njikọ aka na etiti n'etiti TCDD na TÜBİTAK, a ga-ehiwe ụlọ ọrụ ahụ na obodo anyị ga-abụ mba ọsụ ụzọ na-ebupụ teknụzụ na njem ụgbọ oloko. N'ọnọdụ a, ụlọ ọrụ ahụ ga-ebu ụzọ chepụta teknụzụ ụzọ ụgbọ ala nke obodo anyị chọrọ na akụrụngwa obodo na mpaghara ma mezuo nkwekọrịta teknụzụ. Mgbe ịbawanye ikike teknụzụ dị ugbu a nke mba anyị, ụlọ ọrụ ahụ ga-abụ ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ nke teknụzụ okporo ụzọ nke ọdịnihu. ”Minista Turhan chọrọ na Institutelọ Ọrụ nke ilgbọ njem ụgbọ ala ga-aba uru na mba ahụ.
Mgbe okwu ndị a gachara, Prọfesọ TUBITAK. Dr. Hasan Mandal na onye isi njikwa TCDD Ali İhsan Uygun bịanyere aka na nkwado njikọ aka na nguzobe Ulaşım Institute of Rail Transport Technologies .. Mgbe ndị debanyechara aha ha, a na-ese foto dị iche iche.
TÜBİTAK MAM mepụtara Projects Electric Locomotive Projects
A ga-emepụta Diesel n'ime oke nke oru T ProjectBİTAK…
Mmekọrịta n'etiti TCDD na Moroccan okporo ụzọ
Ulo nke Teknụzụ ilgbọ njem ụgbọ elu
TÜBİTAK-MAM Energy Institute
Taa na akụkọ ihe mere eme: 23 September 1856 Turkish Railway
IMM 'Egwuregwu N'egwuregwu Metro'